In da'da digital, anshaxa-badan kharash-doonaa noqdaan caqabadda ah xukuma on cilmi. Taasi waa, in mustaqbalka, waxaan ku dhibtoon doonto in ka yar leh waxa laga qaban karo iyo in ka badan waxa ay tahay in la sameeyo. Sida ay taasi dhacdo, waxaan filaynaa in hab xeerarka ku salaysan ee saynisyahano bulshada iyo hab-ad hoc xogta saynisyahano ah xuubsiiban doono xagga wax la mid ah mabaadi'da ku salaysan soo dhawaaday sharaxay cutubka 6. Waxa kale oo aan filaynaa in sidii anshaxa noqdo cilmi badan oo caan ah caqabadda, waxa uu noqon doonaa mawduuc cilmi laftiisa. In badan si la mid ah in cilmi bulsho haatan sooco, waqtiga iyo tamarta horumarinta hababka cusub oo awood qiyaasaha jaban iyo ka badan oo sax ah, waxaan rajeyneynaa in aan sidoo kale ka shaqeyn doona si ay u horumariyaan hababka in badan yihiin anshaxa masuul ka. Isbeddelkan ayaa dhici doona ma ahan oo keliya, sababtoo ah cilmi daryeeli ku saabsan anshaxa sida dhamaadka ah, laakiin sidoo kale sababta oo ah cilmi-daryeeli ku saabsan anshaxa iyada oo loo adeegsanayo in qabashada cilmi bulsho.
Tusaale ka mid ah habkani waa cilmi on gaarka faraqa (Dwork 2008) . Ka soo qaad in, diiwaanka caafimaadka, tusaale ahaan, isbitaalka ayaa lagu faahfaahiyey iyo cilmi doonayaan in ay fahmaan qaababka ee xogta in. La kala algorithms gaarka loo leeyahay awood dadka in ay su'aal diiwaanka caafimaadka si ay u bartaan oo ku saabsan qaabka wadar ahaan (tusaale ahaan, dadka sigaarka cabba waxay u badan tahay in ay qabto kansarka) iyadoo la yaraynayo halista wax ku saabsan sifooyinka qofka gaar ahaan wax barashada. Horumarinta kuwan nooca algorithms gaarka ah-ilaalinta waxa uu noqday meel firfircoon oo cilmi; arki Dwork and Roth (2014) si loogu daweeyo buug-dherer ah. gaarka ah kala waa tusaale ka mid ah bulshada cilmi-qaadashada caqabad ah anshaxa, waxaa galay mashruuc cilmi-baaris ah, oo markaas horumar ku yaal. Tani waa qaab waxaan u maleynayaa inaan sii kordheysa arki doonaan meelaha kale ee cilmi bulsho.
Sida xoogga cilmi, badanaa iyadoo lala kaashanayo shirkadaha iyo dowladaha, sii si loo kordhiyo, waxa uu noqon doonaa mid sii adkaaneysa in ay ka fogaadaan arrimaha anshaxa oo adag. Waxa uu ahaa aan waayo-aragnimo in saynisyahano bulshada badan oo data saynisyahano u arkaan, kuwaas oo arrimo anshax sida qoyan a in laga fogaadaa. Laakiin, waxaan u maleynayaa in laga fogaado wuxuu noqon doonaa waaqsataa sida istaraatijiyad. Waxaan, bulsho ahaan, qaban kartaa kaliya dhibaatooyinkan haddii aan ku boodaan oo iyaga looga qabto la hal-abuurka iyo dadaal ah in aan ka codsan in ay dhibaatooyin kale oo cilmi-baaris.